समाचार – Nayadhar
पाल्पा । सुख्खा पहिरो खसेपछि सोमबार दिउँसोदेखि अवरुद्ध तानसेन– बुटवल सडकखण्ड खुलेको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका –५ कालीमाटीमा सोमबार दिउँसो सुख्खा पहिरो खसेको थियो । पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सोमबार रातीदेखि एकतर्फी खुलेको हो । सडक दुईतर्फ खुलाउन केही समय लाग्ने बताईएको छ ।
तानसेन । सोमबार दिउँसो सुख्खा पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन-बुटवल सडक खण्ड अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालयले सडक खुलाउन समयमा पहल नगरेका कारण अवरुद्ध राजमार्ग खुल्न नसकेको हो । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत तिनाउ गाउँपालिका वढा नं–५ कालीमाटीमा दिउँसो साढे १ बजे खसेको पहिरो बेलुका १० बज्दासम्म नपान्छाउदा यात्रुहरु अलपत्र परेका छन् । ढुङ्गा र बाँसको झाडीसहित खसेको सुख्खा पहिरो हटाउन दुई घण्टा लाग्ने जानकारी प्रहरीले दिएपनि अहिलेसम...
पाल्पा । सुख्खा पहिरो खसेका कारण तानसेन– बुटवल सडकखण्ड यतिबेला अवरुद्ध छ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका –५ कालीमाटीमा सोमबार दिउँसो १ः१० बजे सुख्खा पहिरो खसेको थियो । सम्बन्धित समाचार : कालीमाटीमा सुख्खा पहिरो खस्यो, तानसेन–बुटवल सडक अवरुद्ध सडकमा ढुंगा र बाँसको झाडीसहित सुख्खा पहिरो खसेपछि सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । पहिरो खसेको दुई घण्टा हुँदा अहिले जेसीबीले पहिरो पन्छाउने काम गरिरहेको छ । तानसेनदेखि वुटवलतर्फ जाने तथा बुटवलदेखि तानसेनतर्फ आउने सवारीस...
पाल्पा । सुख्खा पहिरो खस्दा तानसेन– बुटवल सडक अवरुद्ध भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडकको तिनाउ गाउँपालिका –५ कालीमाटीमा सोमबार दिउँसो १ बजे सुख्खा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो । सडकमा ढुंगा र बाँसको झाडीसहित सुख्खा पहिरो खसेको हो । अहिले पाल्पादेखि वुटवलतर्फ जाने तथा बुटवलदेखि पाल्पातर्फ आउने सवारीसाधन सडकमै रोकिएका छन् । सडक पूर्णरुमा अवरुद्ध छ । सडक डिभिजन कार्यालयको एउटा जेसीबीले पहिरो पन्छाउने काम सुरु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प...
पाल्पा । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा यसअघिकै जनप्रतिनिधि दोहोरिएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुबै पदमा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद भण्डारी ५ हजार ५ सय ८६ मत ल्याई विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाल एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार दुर्गाप्रसाद अधिकारीले ४ हजार ५ सय ४२ मत ल्याएका छन् । यस्तै, उपाध्यक्षमा एमालेकी उम्मेदवार राधाकुमारी श्रेष्ठ ५ हजार ७ सय १९ मतसहित विजयी हुँदा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कां...
पाल्पा । पाल्पामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । तानसेन नगरपालिका –९ दमकडा बजारमा गएराति भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा गम्भीर घाईते भएका तिनाउ गाउँपालिका – ५ मस्यामका २२ वर्षीय योगेश रास्कोटीको उपचारका क्रममा आईतबार मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका पाल्पाका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । माथागढी गाउँपालिका ३ सराईबाट पाल्पा–बुटवल सडकखण्डअन्तर्गतको बाँस्टारीतर्फ आउँदै गरेको लु ७७ ...
पाल्पा । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकामा कडा सुरक्षा घेराभित्र मतगणना जारी छ । आइतबार बिहान १० बजे प्राप्त जानकारी अनुसार ५ वडा रहेको गाउँपालिकामा वडा नंं. १, वडा नं. ४ र वडा नं. ५ को मतगणना सकिएको छ । अहिले वडा नं. २ को मतगणना जारी छ । गाउँपालिकाको वडा नं. १ को अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन् । त्यस्तै वडा नं. ४ र ५ मा भने नेकपा एमाले प्यानलसहित विजयी भएको छ । वडा नं. २ मा १ हजार ७५१ मत खसेकोमा १ हजार ४०० मत गणना भईसकेको गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत क...
पाल्पा । स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत फेरी पाँच वर्षका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । तानसेनबासीले पनि पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदबहाली समेत गरिसकेका छन् । ‘नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के कामलाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ला ?’ नयाँधार टिमले तानसेनका केही स्थानीयहरुसँग जिज्ञासा राखेको छ । प्रस्तुत छ उनीहरुको जवाफ जस्ताको त्यस्तै । बसन्त बस्याल – ता.न.पा ११ (फर्निचर व्यवसाय) तानसेन नगरपालिकाका केही वडाहरु ग्रामीण भेगमा...
पाल्पा ।पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्कीले पदवाहली गरेका छन् । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित कार्कीले पदवाहली गरेका छन् । गाउपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित अध्यक्ष नारायण बहादुर कार्की, उपाध्यक्ष कान्ता अधिकारी सहितको जनप्रतिनिधिहरुले पदवाहली गरेका हुन् । पदवाहली कार्यक्रममा निर्वतमान अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसीले सबै जनप्रतिनिधिलाई स्वागत गरेका थिए । पदवाहली कार्यक्रम पछि अध्यक्ष कार्कीले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई मध्...
नयाँधार संवाददाता पाल्पा । पछाडि कालो झोला, संगै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भिरेका । शिरमा रातो टोपी, आँखामा कालो चस्मा, गलामा रुद्राक्षको माला र खादा पहिरिएका । जब ति व्यक्ती उल्टो हिँडदै तानसेनको शित्तलपाटीस्थित मूलढोकाबाट दरबारतर्फ लागे, उनलाई चिन्न गाह्रो भएन । किनकी दुई–तीन दिनयता पाल्पाको केराबारी, बाँस्टारी, बर्तुङमा स्थानीयहरुले बाटोमा फूल, मालाले स्वागत गरेको भिडियो, फोटो फेसबुकमा राखिसकेका थिए । उनी थिए, उल्टो पैदल यात्री दाङका ३० वर्षीय ऋषि परियार । यी ठिटोले...